Vidio na-egosi usoro mpịakọta nke Samsung Galaxy Note 7 | Gam akporosis
Vidio leaked na-akwado akụkụ gbagọrọ agbagọ nke Samsung Galaxy Note 7
Mgbe ọtụtụ afọ nke a na-eji na-ewepụghị-usoro smartphones, Samsung mebiri na ahụ mara mma na otutu nke elu-ọgwụgwụ smartphones nke o nyere onu onu ka onye ọrụ wee nwaa ịzụta ha na-agbalị ọzọ imewe na a ama. N'ikpeazụ, Samsung ghọtara na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ gbalịrị ihu ihuenyo ahụ na na Galaxy Note 7 ọ ga-abụ ụkpụrụ.
Ọ bụrụ na ọ bụghị ka anyị mata na ọ ga-adị otu a, ọ gbafuola vidiyo na nke ị nwere ike ịchọta onye na-emepụta Korean nke Galaxy Note 7 na ndị ahụ akụkụ curved nke a na-anwale nchebe ihuenyo. Ngwa nke a hụrụ ka ọ gbanwee maka usoro nke ekwentị a, yabụ ndị nrụpụta nke ndị nchebe a ga-eche maka ihu ihu ndị a ga-abụ ọkọlọtọ maka ọtụtụ ụdị dị ka Nkọwa 7 a.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị na-eche ihu Nkọwa 7, ebe ọ bụ na, dị ka ọ dị n'ọtụtụ n'ime onyonyo ya, enweghị a mkpịsị n'ime ha na-eduga anyị mgbe ụfọdụ inwe obi abụọ ndị a. Ọ bụ ezie na anyị anọrọla na nkwupụta na naanị ụdị ahụ ga-adị na nsọtụ mgbe ụfọdụ ule nwesịrị ọtụtụ ngwụcha ngwụcha nke enwere ike ịzụta ihu ihu, anyị ga-echere ruo August 2 maka nkwenye ikpeazụ, ebe ọ bụ ụbọchị e gosipụtara ya.
Ma ọ bụ na leaks anaghị akwụsị banyere iris nyocha ma ọ bụ kaadị UFS na-ewepu n'ihu nke Galaxy Note 7 na, ekele maka ozi a, nwere welitere atụmanya zuru ezu, karịsịa ma ọ bụrụ na Samsung bụ ike nke launching ọzọ pụrụ iche ọnụ dị ka Samsung Galaxy S7. Ihe na-erughị ụbọchị 15 iji wepụ obi abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vidio leaked na-akwado akụkụ gbagọrọ agbagọ nke Samsung Galaxy Note 7
[APK] Nwelite ohuru nke Pokemon Go 0.29.3 dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play na APK